Italy,Germany,Sweden Iyo Netherland Oo Lagu Garaacay Ciyaaro Saaxibtinimo Oo Ay Dheeleen - jornalizem
Italy,Germany,Sweden Iyo Netherland Oo Lagu Garaacay Ciyaaro Saaxibtinimo Oo Ay Dheeleen
Ciyaaro saaxibtinimo oo ay ku kulmeen wadamo caan ku ah kubbada cagta ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah.
Ciyaarahan oo ahaa kuwo ay qaramada ugu diyaargaroobayeen kulamada isreebreebka koobka adduunka ee 2014ka ayaa natiijooyinkooda waxa ay ahaayeen kuwo la yaab leh kadib markii wadamo la filayay in ay guulo keeni karaan laga badiyey halka qaar kalana ay barbaro galeen.
Xulka England ayaa ka aargutay xulka Italy kadib markii 2-1 uu ugaga badiyey ciyaar ka dhacday dalka Swizerland. Kulankan oo labada wadanba ay ka maqnaayeen ciyaaryahano waaweyn ayaa goolkii hore waxaa loogaga naxsaday xulka England hase yeeshee labo gool ayuu ugu jawaabay goolkii lagu bilaabay.
Xulka England ayaa guushan uu ka gaaray Italy waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysey ee uu ka badiyo xulka Talyaaniga tan iyo sanadkii 1997dii markaa oo uu ciyaar saaxibtinimo ugaga badiyey.
Xulka Jarmalka oo la filayay in uu iska celin doono xulka Arjentine ayaa 3-1 looga badiyey waxaana saddexda gool mid kamid ah uu ahaa mid ay xulka Jarmalka iska dhaliyeen.
Xulka Netherland oo la rajaynayay in uu ku barbaran doono xulka Belgiumka kadib markii ay la soo shir tageen laacibiin waaweyn dhowaana uu tababare cusub qabtay ayaa 4-2 loogaga badiyey iyadoo goolka lagu bilaabay balse ay labo gool keensadeen. Waxaa la yaab noqotay kadib markii xulka Holland qeybtii dambe saddex gool daqiiqado badan aanay u dhaxeyn laga dhaliyey.
Xulka Sweden ayaa kamid ah wadamada caawa laga badiyey waxaana xulka Brazil oo dhowaan 23jiradooda laga qaatay biladaha dahabka ah lagu garaacay 3-0, xulka Faransiiska iyo Uruguay ayaa eber iyo eber ku kala baxay halka xulka Portuqal uu 2-0 ugu awood sheegtay xulka Panama. Xulka Spain ayaa 2-1 waxa uu ugaga badiyey xulka Puerto Rico.
Natiijooyinka kulamadii kale ayaa waxa ay ahaayeen sidan:-
Japan1 – 1Venezuela
Korea Republic2 – 1Zambia
China1 – 1Ghana
Singapore2 – 0Hong Kong
Azerbaijan3 – 0Bahrain
Russia1 – 1Ivory Coast
Angola2 – 0Mozambique
Armenia1 – 2Belarus
Botswana3 – 3Tanzania
Tunisia2 – 2Iran
Oman1 – 1Egypt
Bulgaria1 – 0Cyprus
Luxembourg1 – 2Georgia
Norway2 – 3Greece
Sweden0 – 3Brazil
Ukraine0 – 0Czech Republic
Denmark1 – 3Slovakia
Albania0 – 0Moldova
Austria2 – 0Turkey
Croatia2 – 4Switzerland
Hungary1 – 1Israel
Montenegro2 – 0Latvia
Rep. of Macedonia1 – 0Lithuania
Estonia1 – 0Poland
Northern Ireland3 – 3Finland
Serbia0 – 0Rep. of Ireland
Slovenia4 – 3Romania
Wales0 – 2Bosnia-Herzegovina
Scotland3 – 1Australia